Kooxda AS Roma oo doonaysa inay Defrel kusoo bedelato Nicola Sansone – Gool FM
(Roma) 25 Jan 2018 – Kooxda AS Roma ayaa hollinaysa inay Gregoire Defrel kusoo bedelato qannaaska Villarreal ee asal Talyaaniga ah ee Nicola Sansone, balse Edin Dzeko ayaa ka caga jiidaya kooxda Chelsea.
Warar badan oo Talyaaniga ka imanaya ayaa sheegaya in laacibkan reer Bosnia uu kaliya aqbalayo Chelsea haddii gacanta laga saaro qandaraas taxnaanaya ilaa Juun 2020, halka kooxda reer Premier League ay kaliya diyaar u tahay qandaraas 18-bilood ah maaddaama uu 32 jirsanayo bisha Maarso ee soo dhow.
Yeelkeede, Mediaset Premium ayaa sheegaya in agaasimaha ciyaaraha ee Roma Mr Monchi uu durba u howl galay helitaanka biddaalkii Dzeko isagoo isha ku haya qannaaska kooxda La Liga ee Villarreal.
Fikraddiisu waa inuu uga soo beddeshaa Defrel oo ay laacibkan wada joogi jireen Sassuolo, kaasoo ah Sansone.
Laacibkan oo 26 jir ah ayaa ku dhashay Germany isagoo ku barbaaray kooxda Bayern Munich, balse wuxuu kusoo caan baxay kooxda Sassuolo oo uu laylin jirey isla macallinka haatan ee Roma ee Eusebio Di Francesco.
Mohamed Elneny oo sii kululeeyay xurguftii kala dhexeysay Alexis Sanchez